तिथि मेरो पत्रु » तपाईंको तिथि प्रभावित – सफलताका लागि ड्रेस
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 30 2020 |3मिनेट पढ्न
तपाईं कहिल्यै राम्रो पहिलो प्रभाव बनाउन एक दोश्रो मौका भेटिन्छ. यो भन्दा मान्छे तत्काल बनाउन त्यो सत्य हो, अक्सर अवचेतन, आफ्नो पहिलो बैठक पहिलो केही सेकेन्ड मा आधारित कसैको व्यक्तित्व न्याय. यो तथ्यलाई कारण, यो एक पहिलो तारीख लागि बैठक जब राम्रो देखिन र लुगा लगाउन त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ. उपयुक्त पहिरन, राम्रो कोरीबाटीमा, र फैशन शैली साँच्चै एक पहिलो तारीख मा कुनै पनि प्रभावित गर्न सक्छ, र तिनीहरूले दोस्रो मिति महसुस कसरी हुनेछ सन्दर्भमा बनाउन-वा-ब्रेक कारक हुन सक्छ. यहाँ प्रभावित गर्ने प्रयास गर्दा तपाईं आफ्नो राम्रो देखिन मदत गर्न केहि सुझाव हो.
तपाईंको सर्वश्रेष्ठ हेर्न सिक्नु
तपाईं शैली को एक निष्क्रिय अर्थमा छैन भने, तिमी सबै भन्दा राम्रो लग रहेको पत्ता आफ्नो शरीर प्रकार फिट गर्न अनुसन्धान को एक छोटा सा के गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अनुहारको रुप रंग, र व्यक्तित्व. एक राम्रो तरिका के रंग तपाईं मा सबै भन्दा राम्रो रङ विश्लेषण गरेका छन् छ हेर्न पत्ता लगाउन. तपाईं मा एक रंग विश्लेषण गर्न सक्छ कि एक सम्मानित स्पा वा सैलून हेर्नुहोस् र हाम्रो पूरा संग सबै भन्दा राम्रो काम जो रंग पत्ता. विश्लेषण मा आधारित, बाहिर जाने र आफ्नो संगत रङ योजना भित्र काम केही संगठन किन्न.
आउटफिट के अर्को तरिका पत्ता लगाउन, बनाउन-अप, र फैशन छनौटहरूले तपाईं मा सबै भन्दा राम्रो के आफ्नो मित्रहरुलाई को ट्रयाक राखन छ हेर्न, परिवार, र सह-कामदारहरूको तपाईं यसो छन्. आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र कुनै खास रंग लगाउने जब तपाईं हेर्न कसरी राम्रो बारेमा टिप्पणी राख्छ भने, कि ध्यान बनाउन र आफ्नो मिति मा कि रंग लगाउने. सह-कामदारहरूको आफ्नो नयाँ बाल वा संगठन बारे बडबडाना भने, यो कि बाल वा संगठन तपाईं मा चापलूसी छ कि एक राम्रो संकेत हो र एक पहिलो तारीख लागि एक राम्रो विकल्प हुनेछ.
तपाईं पनि तपाईं आफ्नो मिति पोशाक लागि तपाईं संग किन्दै बाहिर स्टाइलिश विचार कि एक मित्र लिन सक्छ. यो पनि राख्न केही फेसन पत्रिका मार्फत पढ्न एक राम्रो विचार हुन सक्छ अप-टु-डेट सिफारिसहरू आधारित लहड र खरिद डेटिङ लुगा मा. के तपाईं आफ्नो साथीहरूको देखि प्राप्त प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारको हेर्न मिति जान अघि सार्वजनिक मा आफ्नो नयाँ पोशाक खिइएर सुनिश्चित. आफ्नो पहिलो तारीख मा केहि ब्रान्ड नयाँ संग प्रयोग नगर्नुहोस्.
सूक्ष्म हुनुहोस् – कम अधिक छ
आफ्नो मिति लागि तयार गर्दा जाना छैन. हामी सबै हाम्रो राम्रो देखिन चाहनुहुन्छ, तर स्नायु तपाईं आफ्नो बनाउन-अप संग धेरै दूर एक बिट जान कारण हुन सक्छ, लुगा, वा सुगन्ध. सम्झना, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो अनुहार को जोड दिन्छ कि सूक्ष्म बनाउन-माथि भारी आफ्नो दोषहरु र उज्ज्वल लिपस्टिक वा शर्मंदगी बनाउन लुकाउने कोसिस भन्दा राम्रो छाप पार्न सक्छ.
यो कपडे सामान र गरगहना मा सजिलो जान पनि महत्त्वपूर्ण छ. राम्रो झुमके, एक सुन्दर घडी, वा स्वादिष्ट हार एक व्यक्तिको सुन्दरता र शैली जोड मदत गर्न सक्छ, तर भारी सुन चेन, हरेक औंला मा छल्ले, र भडकीला कंगन तेरा प्राकृतिक सौन्दर्य स्वीकार्नु देखि एक मिति अलमल्याउन सक्छ.
कोलोन वा अत्तर छर्केर जब, आफ्नो सुगन्ध आफूलाई drench छैन! आफ्नो सुगन्ध संग कज्याउने जोगिन गर्न, ड्रेसिंग अघि तपाईं को सामने कोलोन वा अत्तर स्प्रे र त्यसपछि स्प्रे मा हिंड्न. यो एक जोडदार बास्ना बिना सुगन्ध एक सूक्ष्म सङ्केत दिनेछु.
फैशन Dos र Don'ts डेटिंग सधैं सम्झना गर्न
यहाँ एक मिति भइरहेको जब तपाईं सधैं पालना गर्नुपर्छ केही फेसन सुझाव हो:
1. सफा छ, राम्रो तरिकाले manicured हात, राम्रो-पोल लगाइदिनुभएछ अनुहार कपाल, र सफा बाल.
2. फिट लुगाहरू लगाउनुहोस् र तपाईं गर्दैनन्, पनि धोक्रे केहि जोगिन (यो तपाईं बोसो वा frumpy हेर्न बनाउन सक्छ) र केहि पनि तंग या सीमित टाढा रहन.
3. अवसर लागि उचित पोशाक, ट्यांक टप र जुत्ता टाढा रहन (यो आफ्नो सामान्य शैली छ भने पनि) तपाईं र तपाईंको मिति एक रात्रिभोजमा उपस्थित हुन्छन् भने
अनि यहाँ एक पहिलो तारीख मा प्रभावित ड्रेसिंग जब तपाईं हुँदैन केही कुराहरू छन्:
1. ब्रान्ड नयाँ जुत्ता लगाउन छैन वा एक संगठन तपाईंलाई नयाँ जूता मा आरामदायी छैनन् के उनीहरूले ठीक मा भङ्ग छैन भने साँच्चै आफ्नो खुट्टा चोट गर्न सक्ने क्षमता छ र, तपाईं निरन्तर आफ्नो टाई वा कलर समायोजन हुन्छन् भने तपाईंलाई एक सूट मा आरामदायी छैनन् किनभने, तपाईं आफ्नो मिति बन्द हुनेछ.
2. भारी बनाउन-माथि र अपमानजनक संगठन जोगिने, तिनीहरूले तपाईं साँच्चै जो टाढा लिन र आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरता.
3. पनि आधुनिक हुन नगर्नुहोस्; तपाईं यसलाई तान्न सक्षम नहुन सक्छ. तपाईं आफ्नो नजर संग प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, मिति अघि यो के र नजर तपाईं को लागि काम गर्दछ कि छैन रूपमा प्रतिक्रिया प्राप्त.